Bit By Bit - ဆိုင်ရာကိုယ်ကျင့်တရား - 6.7.1 အဆိုပါ IRB တစ်ဦးကြမ်းပြင်, မတစ်ဦးမျက်နှာကြက်သည်
အများစုကသုတေသီများ IRB ၏ဆနျ့ကငျြအမြင်များကိုကိုင်ထားပုံရသည်။ တဖကျတှငျ, ထိုသူတို့ IRB တစ် bumbling ဗျူရိုကရေစီဖြစ်စဉ်းစားပါ။ သို့သျောလညျး, တစ်ချိန်တည်းမှာ, သူတို့ကလည်း IRB ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များ၏နောက်ဆုံးခုံသမာဓိရုံးဖြစ်စဉ်းစားပါ။ ဆိုလိုတာကသူတို့က IRB ကအတည်ပြုပေးခဲ့သည်လျှင် OK ကိုဖြစ်ရမည်ဟုယုံကြည်ရန်ပုံရသည်။ သူတို့လက်ရှိတည်ရှိနေနှင့်ထိုသူတို့တွင်များစွာသောသူတို့ကိုရှိပါတယ်သကဲ့သို့ငါတို့သည် IRBs ၏အလွန်မှန်ကန်န့်အသတ်အသိအမှတျပွုခဲ့လျှင် (Schrag 2010; Schrag 2011; Hoonaard 2011; Klitzman 2015; King and Sands 2015; Schneider 2015) သုတေသီများသည်အတိုင်းကိုငါတို့သည်အပိုဆောင်းအပေါ်ယူရမယ် -then ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုတေသန၏ကျင့်ဝတ်ဘို့တာဝန်။ အဆိုပါ IRB တစ်ဦးကြမ်းပြင်မမျက်နှာကျက်သည်, ဤစိတ်ကူးနှစ်ခုအဓိကသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
ပထမဦးစွာ IRB တစ်ဦးကြမ်းပြင်သင် IRB ပြန်လည်သုံးသပ်လိုအပ်သည့်အဖွဲ့အစည်းမှာအလုပ်လုပ်နေကြတယ်လျှင်, သငျသညျသူတို့အားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအတိုင်းလိုက်နာသင့်ကြောင်းဆိုလိုသည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်သိသာထင်ရစေခြင်းငှါ, ငါမူကားအချို့လူတွေ IRB ကိုရှောင်ရှားချင်ဟန်ကိုသတိထားမိပါတယ်။ သငျသညျ Ethics မတည်မငြိမ်ဒေသများတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည်ဆိုပါကတကယ်တော့, ထို IRB အားကောင်းတဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင်သည်သူတို့၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအတိုင်းလိုက်နာ အကယ်. တစ်ခုခုသင့်ရဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းမှားသွားသင့်တယ်, သူတို့သင်နောက်ကွယ်မှရပ်သင့်ပါတယ် (King and Sands 2015) ။ သင်သည်သူတို့၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအတိုင်းလိုက်နာကြဘူးလျှင်, သင်ဟာအလွန်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမှာသင့်ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ထွက်ဖြစ်ကြသည်ကိုရှာဖွေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဒုတိယ, IRB တစ်ဦးမျက်နှာကြက်ပဲသင့်ရဲ့ပုံစံများကိုဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်မလောက်မအတွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအောက်ပါဆိုလိုသည်မဟုတ်။ မြားစှာသောအခြေအနေများအတွက်သုတေသီသကဲ့သို့သငျဆုံး Ethics ပြုမူဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းသိတယ်သူကိုတဝတည်းဖြစ်ကြ၏။ နောက်ဆုံးတွင်သင်သုတေသီဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကျင့်ဝတ်တာဝန်သင်တို့နှင့်အတူတည်ရှိသည်; ကစက္ကူပေါ်တွင်သင်၏နာမကိုအမှီဖြစ်ပါတယ်။
သင်တစ်ဦးမျက်နှာကြက်တစ်ဦးကြမ်းပြင်အဖြစ် IRB ပြုမူဆက်ဆံနှင့်မကြောင်းသေချာစေရန်တစ်ခုမှာလမ်းသင့်ရဲ့စာတမ်းများအတွက်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာနောက်ဆက်တွဲပါဝင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့လေ့လာမှုပင်သင်သည်သင်၏ရွယ်တူများနှင့်အများပြည်သူရန်သင်၏အလုပ်ရှင်းပြပါလိမ့်မည်ကိုမည်သို့စဉ်းစားရန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတင်းနိုင်ရန်အတွက်စတင်ခဲ့သည်ခင်မှာတကယ်တော့, သင်သည်သင်၏ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာနောက်ဆက်တွဲရေးဆွဲနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့နောကျဆကျတှဲရေးသားနေစဉ်အတွင်းသင်ကိုယ်တိုင်မသက်မသာတှေ့လြှငျ, ထို့နောက်သင့်လေ့လာမှုသင့်လျော်သောကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာချိန်ခွင်လျှာဒဏ်ခတ်မပြုစေခြင်းငှါ။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ရောဂါကူညီပေးနေအပြင်, သင့်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာနောက်ဆက်တွဲထုတ်ဝြေခင်းသုတေသနအသိုင်းအဝိုင်းကကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုဆွေးနွေးရန်ကူညီပေးပါမည်နှင့်စစ်မှန်သောပင်ကိုယ်မူလသုတေသနလုပ်ငန်းမှဥပမာပေါ်မှာအခြေခံပြီးသင့်လျော်သောစံချိန်စံညွှန်းကိုမြဲမြံစေ။ စားပွဲတင်ငါသုတေသနလုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်ကောင်းဆွေးနွေးစဉ်းစားကြောင်း 6.3 ပစ္စုပ္ပန်ပင်ကိုယ်မူလသုတေသနလုပ်ငန်းစာတမ်းများ။ ဒီဆွေးနွေးမှုအတွက်စာရေးဆရာအားဖြင့်တိုင်းပြောဆိုချက်ကိုနှင့်အတူသဘောမတူဘူး, ဒါပေမဲ့သူတို့ကသတ်မှတ်ထားတဲ့သဘောနဲ့သမာဓိနှင့်အတူသရုပ်ဆောင်သုတေသီအားလုံးနမူနာ Carter (1996) : အသီးအသီးအမှု၌, သုတေသီများ (1) သူတို့မှန်သည်ထင်သောအရာကိုဆုံးဖြတ် နှင့်မှားအဘယ်သို့သောအ; (2) သူတို့ကပင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကုန်ကျစရိတ်မှာဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီအရာပေါ်အခြေခံသည့်ပြုမူ; (3) သူတို့လူသိရှင်ကြားသူတို့အခြေအနေကိုသူတို့ရဲ့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအပေါ်အခြေခံပြီးသရုပ်ဆောင်ဖြစ်ကြောင်းပြသပါ။
စားပွဲတင် 6.3: ကသူတို့ရဲ့သုတေသနပြုချက်များ၏ကျင့်ဝတ်၏စိတ်ဝင်စားစရာဆွေးနွေးမှုများနှင့်အတူစာတမ်းများ။
Rijt et al. (2014) ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲလယ်ပြင်စမ်းသပ်ချက်
Paluck and Green (2009) တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးဆဲထဲမှာလယ်ပြင်စမ်းသပ်ချက်
Burnett and Feamster (2015) ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲသုတေသနလုပ်ငန်း
Chaabane et al. (2014) သုတေသန၏လူမှုရေးသက်ရောက်မှု
Jakobsson and Ratkiewicz (2006) ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲလယ်ပြင်စမ်းသပ်ချက်
Soeller et al. (2016) ဝန်ဆောင်မှု၏စည်းကမ်းချက်များကိုချိုးဖောက်